နာယက နှင့် ဥက္ကဌ ဖြေပါ + တက္ကသိုလ် မှိုလိုပေါက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နာယက နှင့် ဥက္ကဌ ဖြေပါ + တက္ကသိုလ် မှိုလိုပေါက်
နာယက နှင့် ဥက္ကဌ ဖြေပါ + တက္ကသိုလ် မှိုလိုပေါက်
Posted by myanmarcitizen on Mar 1, 2012 in Copy/Paste | 11 comments
A.နာယက နှင့် ဥက္ကဌ ဖြေပါ
“ပြည်သူ့ဆန္ဒ – လွှတ်တော်ဆန္ဒ”
၁။ ခင်ဗျားတို့ ပြည်သူ့အသံကို ဘယ်နားနဲ့နားထောင်သလဲ (ရိုင်းသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ)။
(နံပါတ် ၂ ကိုပြုလုပ်ခွင့်မရတော့ ဘာသံကြားရဦးမှာလဲ)
၂။ ဘယ်တော့ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းဆန္ဒထုတ်ဖော်(ဆန္ဒပြ)ခွင့်ရမလဲ။
၃။ လာမယ့်ကြားဖြတ်ရွှေးကောက်ပွဲမှာ ကြိုတင်မဲဆိုတာ ကောရှိအုန်းမှာလား။
၄။ India နဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ လွှတ်တော်တွေကို သွားရောက်လေ့လာတယ် သတင်းမှာတွေ့ရပါတယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အဲဒီကိစ္စမျိုးရှိလို့ ဧည့်စားရင်တိုင်ဖို့ လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုလိုက်တာလား။ ပြည်သူတွေက ကောအဲ့ကိစ္စကို လက်ခံတယ်လို့ယူဆပါသလား။
(အပေါ် Post ကစာနဲနေလို့ နောက်တပ်တစ်ခုပါ ရောကျိတ်လိုက်ပါကြောင်း)
B. တက္ကသိုလ် မှိုလိုပေါက်
တက္ကသိုလ်တွေ ဟိုမှာဖွင့်လိုက်ဒီမှာဖွင့်လိုက်နဲ့ အဲ့ကိစ္စကို ရင်ထဲမှာ အစာမကျေတာကြာပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ရေး ဖြစ်သွားတယ်လေ။ ဦးရှစ်လုံး ရခိုင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်။ ကျောက်ဖြူ ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ သွားကြည့်တယ်။ ဒေ၀ူး company က စာသင်ကျောင်း2ကျောင်း နှင့် Generator လှူတာတွေပဲ ပြနေတယ်။ ဂုဏ်ယူနေကြတယ်။ သူလှူတာက နဲနဲ ကိုယ့်ဆီကဘာတွေပြန်ပါသွားလဲ တရုပ်တွေဆီကို။ ပိုက်လိုင်းတွေသွယ် ပြီး second နှင့်အမျှ ယူတော့မှာ။ ဟိုကကျောင်းလေး ဆောက်ပေး မီးစက်လေးပေး အလှူငွေလေးနဲ့ ဒေသခံတွေ ကိုချွေးသိပ်နေကြတယ်။ ဒုတိယသမတ လာတော့ လက်အုပ်ကလေးတွေချီလို့ဗျား ကျောက်ဖြူမှာ ကော၊ သံတွဲမှာကော။ ခုထိဒို့ပြည်သူတွေဘက်ကလဲ ဒီအကျင့်တွေမပျောက်သေးကြဘူး။ (MG က သံတွဲကသူတွေတွေ့မိလိုက်ကြလား)။ လက်အုပ်ချီစရာလားဗျာ သူကဘာမို့လို့လဲ။ အဲ့လိုလုပ်လို့လဲ အာဏာကို ပိုရက်မှုးနေကြတာလားမသိ။
တက္ကသိုလ်အကြောင်းဆက်ကြရအောင် MG က သူငယ်ချင်းတွေလဲ ဝေဖန်ပေးကြပါအုန်းဗျာ။ အခုလဲ တောင်ဂုတ်မှာ ဆောက်တော့မယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းကို ဥပမာကြည့်ကြရအောင် မြို့တော် ပုသိမ်မှာ ရှိတယ်။ မအူပင်မှာရှိတယ်။ ဟင်္သတ မှာရှိတယ်။(ကျွန်တော်သိသလောက်) အဲ့လောက်ထိမလိုဘူးလို့ထင်မိတယ်။
သူတို့ကတော့ပြောမှာပေါ့ဒေသခံတွေ ပိုက်ဆံသက်သက်သာသာနဲ့(အိုးမကွာအိမ်မကွာ) အဆင့်မြင့်ပညာ တွေကိုသင်ကြားနိုင်ပြီ ဘာညာပေါ့။ အဲ့လိုသာတွေးရင် တစ်ရွာ တစ်ခုသာဆောက်လိုက်ကြပါတော့။ ကျောင်းသား အတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတယ်ဆိုတာကတော့ အတိုင်းအတာတခုထိမှန်ပါတယ် (ဒါပေမယ့် သိပ်တော့ ကွာလှမယ်မထင်ဘူး ထားလိုက်တော့)။ ပိုက်ဆံတော့သက်သာပါရဲ့ အဲ့ကရတဲ့ဘွဲ့က သုံးစားလို့မရ။ နောက်အလုပ်ရဖို့အတွက် သင်တန်းတွေထပ်တက် ထပ်ကုန် ဘာထူးပါသလဲ။ တက္ကသိုလ် တွေ ကမှိုလိုပေါက် အဲ့တော့ ဆရာတွေကမလောက် လောက်အောင်လို့ ကြုံရာဆွဲခန့် အဲ့ဒီလူတွေက ဆရာဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားတွေကိုသင်။ ဆရာပညာကလဲ မပြည့်စုံ တော့ မခက်ပေဘူးလား။
ကျွန်တော် Computer University နဲ့ပဲ ဥပမာပေးပါ့မယ်။ Programming (OOP C++) စာသင်တဲ့ ဆရာမက Program တစ်ပုဒ်ကောင်းကောင်းမရေးဘူးဘူး။ ရေးလဲမရေးတပ်ဘူး။ နောက်ဆုံး ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဗျာ Sorting စီတာ တောင်မသိဘူး။ အဲ့လိုသူမျိုးက စာသင်နေတော့မခက်လား။ သူ့တပည့် တွေဆိုပိုလို့ဆိုးပြီပေါ့။ (နယ်က Computer University တစ်ခုကအကြောင်းပါ)။ အဲ့ဒီတော့ University တွေ များလာတာကောင်းလား။ ထွက်လာတဲ့ သူတွေကကော တကယ်အသုံးချလို့ရတဲ့အရည်အချင်းရှိရောလား။
Computer University ကကျောင်းပြီးလာတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက် လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ရက်လောက်ကတွေ့တယ်။ သူကိုခန့်ထားတာ က Internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်အတွက် ခန့်ထားတာပါ။ customer တွေဆီကို product ပုံတွေ mail ပို့ပေးမယ် နောက် Product အသစ်တွေကို ရှာမယ် ဒါသူ့အလုပ်။ အတိုချုပ်ပြောရရင် Drive Letter မပြောင်းတပ်ဘူး။ Drive A, B က ဘာအတွက်သုံးလဲမေးကြည့်တော့ သိဘူးတဲ့။ Floppy Drive သိလားဆိုတော့ ဘာတုန်းတဲ့။ အဲ့ဒါ Computer University ကျောင်းဆင်းနှော် (ကျွန်တော်အားလုံး ကိုမရည် ရွယ်ပါဘူး တစ်ချို့ အရမ်းတော်တဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ်)။
ရန်ကုန် University နဲ့ နယ်အရမ်းကွာ ပါတယ် နယ်မှာမီးမရှိဘူး ရှိလဲမှန်မှာမဟုတ်ဘူး။ ရန်ကုန်တောင်မမှန် တာလေ။ Computer University အတွက် မရှိမဖြစ် Computer တွေကမီးရှိမှဖွင့်လို့ရမှာလေ။ အဲ့တော့ မီးမရှိ တဲ့နေရာ သွားဖွင့်ထားတာဘယ်သူ့အပျက်လဲ။ ပြောကြစမ်းပါအုန်း။ ခင်ဗျားတို့ သားသမီးတွေကျတော့ နိုင်ငံခြား မှာအဆင့်မြင့်တဲ့ ကျောင်းတွေမှာထားပြီးတော့ ငါ့တို့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့သားသမီးတွေကျတော့ ရှိစုမဲ့ စုလေး နဲ့ကျောင်းထားခဲ့ရပြီးတော့ ရလာတော့လဲ အဲ့ ဘွဲ့နဲ့ဘာလုပ်လို့ရခဲ့လဲ။
ကျောင်းက အဆောင်မပေးတော့ အပြင်အဆောင်မှာနေ။ အပြင်အဆောင်ဆိုတော့ အထိမ်းအကွတ်မရှိ။ ၁၀ တန်းအောင်ပြီးစ အရွယ်တွေက အသက်ဘယ်လောက်ရှိအုန်းမှာလဲ။ အဲ့မှာတင်ဇာတ်လမ်းတွေက စတော့တယ်။
ဆူပှုမှာဆိုးလို့ နှစ်ရှည်လများ University တွေကိုပိတ်ထားခဲ့။ မြို့ကြီးတွေမှာမထား။ မြို့လည်ခေါင်က ကျောင်း ကြီးကိုထားပြီး အစွန်အဖျားကိုပို့နဲ့ အရင်အစိုးရက လုပ်ခဲ့ကြတယ်လေ။ မိမိအာဏာလေး ခိုင်မြဲဖို့။ အသိပညာ အတပ်ပညာ တွေသင်ပေးတဲ့ကျောင်းကို ပိတ်တော့ ဘာဖြစ်သွားခဲ့လဲ။ ဒါကိုပဲ တစ်ဖက်လှဲ့နဲ့ တိုးတက်လာတယ် Computer University ကဘယ်နှစ်ခု Technical University ကဘယ်နှစ်ခု နဲ့ အရေအ တွက် များတာကို ဂုဏ်ယူနေကြသေးတယ်။
၁. University ကြီးတွေ(National University ခေါ်မလား ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်) ကို အချက်အချာကြတဲ့ မြို့ကြီးတွေ မှာပဲထားမယ်။ ဥပမာ Yangon, Mandalay လိုမျိုးပေါ့။
၂. နောက်ပြီး University ကို သုံးမျိုးလောက်ခွဲလိုက်မယ်။ First(National University) , Second , Third class အလိုက်ပေါ့။ အတော်ဆုံးသူတွေကနေစပြီး သူ့ အဆင့်နဲ့ သူသွားပေါ့။
၃. Medical University ကိုတော့ သီးခြားရပ်တည်ခိုင်းထားရမယ်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ University တွေနဲ့ရောမထားဘူး။ (အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့အတွက် သေချာစိစစ်ပြီးမှလက်ခံမယ်၊ တစ်ပြည်လုံးမှာ ၂ခုပဲထားမယ်)။ သမီးက ဆရာဝန် အဆိုတော်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူမျိုးဆို လစ်တော့ပဲ။ အဲ့ကျောင်းက ထွက်တဲ့သူတွေကို ဆရာဝန်အဖြစ်ပဲ မြင်တွေရမဲ့သူမျိုးကိုသာတက်ခိုင်းမယ်။
၄. တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ ဆရာတွေထဲက ‘ခေါင်’ ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေကို(First) အဲ့မှာထားမယ်။ အဲ့သူတွေက သူ့နယ်ပယ်မှာ အကျွမ်းကျင်ဆုံးသူမျိုးဖြစ်နေရမယ်။ ၀ါသနာလဲပါရမယ်။ ကျိုးစားချင်စိတ်လဲရှိရမယ့်လူမျိုးပေါ့။ ဘယ်လိုမှ သုံးစားလို့မရတဲ့ဆရာမျိုးကိုတော့ လခမပေးတော့ဘူး မောင်းထုတ်ပစ်မယ်။
၅. အသက်အရွယ် အကန့်အသတ်မရှိပဲ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲနဲ့ လက်ခံမယ်။ (ကျွန်တော်လဲ တက်ချင်လို့ J)
၆. တချိန်ထဲမှာပဲ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီတဲ့သင်ရိုးတွေကိုလေ့လာပြုစုပြီး ပြဌန်းရမယ်။
၇. စပြီးတက်မယ်သူတွေအတွက် ဘယ် University ကိုရွေးချယ် သင့်တယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးမယ့် consultant အဖွဲ့ တစ်ခုကို ဖွဲ့ထားမယ်။ အမြဲတမ်းအဖွဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။
၈. Library, Resource Center, Lab တွေ ကိုကျကျနန တည်ဆောက်ပေးမယ်။ တစ်ခြားနိုင်ငံများက University တွေနဲ့လဲ ချိတ်ဆက်ပေးထားမယ်။
၉. လူတန်းစားမရွေး တက်နိုင်တဲ့ သင့်တင့်မျှတတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ လက်ခံပေးမယ်။ University အလိုက်ဈေးနှုန်းအ မျိုးမျိုးပေါ့။ (သင့်တင့်တဲ့ဈေးနှုန်းဆိုပေမဲ့ နဲနဲတော့များလိမ့်မယ်) (ဥပမာ- နယ်ကနေ ပုသိမ်ကိုကျောင်းလာ တက်တဲ့ နယ်ကသူတွေက တစ်လကို 60000-100000 ကြားမှာကုန်တယ်။)
၁၀. ပိုက်ဆံမတပ်နိုင်တဲ့ မိဘတွေအတွက် အစိုရက ငွေချေးပေးရမယ်။ ဒါပေမယ့်ကျောင်းပြီးသွားရင် နိုင်ငံအ တွက်အလုပ်ပြန်လုပ်ပေးရမယ်။
၁၁. နယ်ကျောင်းသားတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ အဆောင်တွေ၊ စားသောက်ရေး အတွက်ကျောင်းက မျှတတဲ့ငွေကြေး နဲ့စီစဉ်ပေးမယ် ။
၁၂. အဆင့်မြင့်တန်းတွေအတွက် ဆရာတွေကို နိုင်ငံခြားက တကယ်ပညာရှင်တွေကို ခေါ်ပြီးသင်ကြားခိုင်းမယ်။ အဲ့အတွက်ငွေကြေးကို University ကပဲတာဝန်ယူမယ်။ (ဘယ်နှနှစ် နိုင်ငံခြားအကူအညီကို ယူရမလဲ နောက် ပိုင်းဆို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်ပတ်နိုင်ပြီလေ)။
၁၃. University ကကျောင်းအုပ်ကြီးတွေကိုလဲ ဘယ်သူ့အမျိုး၊ ပိုင်ရာဆိုင်ရာတွေ ကြောင့်ခန့်တာတွေ ရပ်ပြီး တကယ့် အရည်အချင်းရှိ၊ ဂုဏ်သရေရှိ၊ ၀ါသနာ အနစ်နာခံနိုင်တဲ့သူမျိုးကို ခန့်မယ်။
၁၄. အဲ့ဒီ University တွေကို လွှတ်တော်က (ကျွန်တော့စိတ်ကူးထဲက လွှတ်တော်ကိုပြောတာပါ) ပညာတပ် အမတ်တွေရယ် ပြည်သူတွေထဲက ပညာတပ်တွေရယ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီး ထိမ်းချုပ်ထားမယ်။
၁၅. ကျမ်းမာကြံခိုင်မှ အရာအားလုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာ အားကစား လုပ်ဖို့ ကစားကွင်းတွေ Fitness Center တွေလုပ်ပေးထားမယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့အတွေး သေးသေးလေးနဲ့စဉ်းစားမိတာပါ။
Creative writing and conceptual Idea ကောင်းတဲ့ ပို့လေးပါ ကိုMyanmar Citizen ရေ။ အားပေးပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံသားကြီး ခင်ဗျားပြောတဲ့အစီအစဉ် ရှမ်းပြည်သားတို့ထောက်ခံတယ်။
မကြာမီကမှ ဘွဲ့ရထားတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရော အသက်နှစ်ဆယ်လူငယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ပါထောက်ခံတယ်။
မဟာဘွဲ့သင်တန်းကိုတက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရသွားကြတဲ့သူတွေ ၊ မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်းတက်
ဘွဲ့ရတွေထဲမှာလဲပဲ အရည်အချင်းမပြည့်ဝဘဲ ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခုကို အလှပြရုံသက်သက်အရည်အချင်း
ပါဆင်နယ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်စေချင်တဲ့သဘောကြောင့်ပါ။ ဒီလိုဖော်ပြလိုက်လို့လဲ ဘွဲ့လက်မှတ်
မြန်မာပြည်သူပြည်သားအများစုကို တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပညာရေးအရည်အချင်းတွေ ရရှိစေချင်ပါတယ်။
ပြီးသင်ရိုးကုန်မလေ့လာကြသဖြင့် အရည်အချင်းမရှိခြင်း၊ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသော်လည်းကောင်း ဘက်လိုက်မှု
ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ကျူရှင်များကိုတက်စေလျက် ဆရာ၊ဆရာမများအချင်းချင်း သဘောထားမတိုက်
ဆိုင်မှုများကြောင့် ကျောင်းသားများ ကြားမြေစာပင်ဖြစ်ကြ၍ ငွေကုန်ကြေးကျခံပညာကိုသင်ကြားပါလျက်
စာမေးပွဲများကျရှုံးခြင်း၊ အရည်အချင်းမရှိသူများအား တိုင်ကြားကြမည်စိုး၍အောင်မှတ်များတိုးပေးခြင်း၊
လည်းကောင်း၊ ပါရဂူအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲသင်တန်း(ပရီလင်း)အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ပါရဂူ
ဘွဲ့စာတမ်းများအတွက်သော်လည်းကောင်း သင်တန်းများတက်ရောက်သင်ကြားရာတွင် မိမိတို့အားသင်
ကြားပေးသောဆရာ၊ဆရာမများအတွက် အကောင်းဆုံးဟိုတယ်၊အကောင်းဆုံး အစားအသောက်တို့ ဖြင့် ငွေကြေးမြောက်များစွာကုန်ကျစေလျက် စစ်မှန်သောပညာရှင်၊တတ်ကျွမ်းသော ပညာရှင်တို့အား ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကို မထောင်းသာသောစားရိတ်များကြောင့် ပညာဆက်လက်သင် ကြားခြင်းရပ်ဆိုင်းလိုသောစိတ်တို့ဖြစ်စေခြင်း၊ ဆရာဝန်တစ်ဦးသည် တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့သည့် ပညာသင်စားရိတ်ကြီးမားခြင်းကြောင့် ကျောင်းပြီးသောအခါတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုစေတနာအပြည့်အ၀ဖြင့်စောင့်ရှောက်လိုစိတ်ထက် စားရိတ်များကျေစေရန်ငွေသာကြည့်သောဆေးပညာရှင် များဖြစ်စေခြင်းတို့ကိုကင်းရှင်းစေလိုပါတယ်။Education for all.ဆိုတဲ့စကားလေး အခုချိန်မှာတော့ Education for only rich.ဖြစ်နေပြီလားလို့တောင်ထင်မှားနေမိပါတယ်။ လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာရင် မိမိတို့နေရာပျောက်ကုန်မှာစိုးသောကြောင့် ပညာညဏ်နည်းပါးသော၊ အရည်အချင်း မပြည့်ဝသော လူငယ်များသာဆက်လက်မွေးထုတ်ရေးဆိုသည့် ယခင်အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကြီးဆက် လက်လည်ပတ်နေ ဦးမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကြီးသူများခေါင်းခေါက်ခံ၊အနှိမ်ခံဖြစ်နေဦးမှာပါပဲလို့လည်း အကြံပြုတင်ပြချင်ပါသေးတယ်။ မြန်မာပြည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအေးချမ်းသာယာစေရန် ပညာကိုသင်ကြားလို
စိတ်ပြင်းပြကြသော ၊ ပညာကိုအမှန်တကယ်တတ်ကျွမ်းလိုစိတ်ရှိပြီး ဆက်လက်မသင်ကြားနိုင်ကြသော
မြန်မာနိုင်ငံသားများအပေါင်း မိမိတို့၏ပန်းတိုင်ဖြစ်သည့် အမှန်တကယ်တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်အောင်
သင်ကြားနိုင်သည့် ပညာရေးစနစ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါစေဟု ဆုတောင်းလျက်
အင်း Myanmar citizenရေ……
တက္ကသိုလ်တွေ ဟိုမှာဖွင့်လိုက်ဒီမှာဖွင့်လိုက်နဲ့ အဲ့ကိစ္စကို ရင်ထဲမှာ အစာမကျေတာကြာပါပြီ။
ဒီနေ့တော့ရေး ဖြစ်သွားတယ်လေ။ ဦးရှစ်လုံး ရခိုင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်။ဒုတိယသမ္မတ
လာတော့ လက်အုပ်ကလေးတွေချီလို့ဗျား ကျောက်ဖြူမှာ ကော၊ သံတွဲမှာကော။ ခုထိဒို့ပြည်သူ
တွေဘက်ကလဲ ဒီအကျင့်တွေမပျောက်သေးကြဘူး။ (MG က သံတွဲကသူတွေတွေ့မိလိုက်ကြလား)။
လက်အုပ်ချီစရာလားဗျာ သူကဘာမို့လို့လဲ။ အဲ့လိုလုပ်လို့လဲ အာဏာကို ပိုရက်မှုးနေကြတာလားမသိ။
တက္ကသိုလ်အကြောင်းဆက်ကြရအောင် MG က သူငယ်ချင်းတွေလဲ ဝေဖန်ပေးကြပါအုန်းဗျာ။ အခုလဲ
တောင်ကုတ်မှာ ဆောက်တော့မယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းကို ဥပမာကြည့်ကြရအောင် မြို့တော် ပုသိမ်မှာ
ရှိတယ်။ မအူပင်မှာရှိတယ်။ ဟင်္သတ မှာရှိတယ်။(ကျွန်တော်သိသလောက်) အဲ့လောက်ထိမလိုဘူးလို့ထင်မိတယ်။
ကျနော်ပြောပြချင်တာလေးကို ဖတ်ပေးပါဗျ။ကျနော်က သံတွဲသားစစ်ပေမယ့် အကိုပြောသလို လက်အုပ်ချီ
ပြီးနေတဲ့၊သွားပြီး နားထောင်ကြိုဆိုတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပါဘူး။တကယ်ပါ သံတွဲသားတွေထဲမှာရော၊တောင်ကုတ်မြို့ 
မှာပါ ဒုသမ္မတကို လက်အုပ်ချီကြိုဆိုကြတယ်ဗျ။စဉ်းစာြးုကည့်ရင် ရဟန်း၊သံဃာတွေကို သတ်ခဲ့တဲ့ စစ်ခွေးတွေကို
ရှိခိုးမတတ်လက်အုပ်ချီနေတဲ့ထဲမှာ တောင်ကုတ်မြို့ သူ၊သားတွေက အဆိုးဆုံးပါ။သံတွဲကလူတွေထဲမှာက အရပ်သား
အချို့ ရယ် ဌာနဆိုင်ရာမှဝန်ထမ်းတွေရယ်၊အတင်းခိုင်းစေခံနေရသူတွေရယ်နဲ့ ကပ်ဖား(လီးစုပ်၊ဖင်ခံ)တွေဘဲပြု
တောင်ကုတ်မြို့ မှာတော့ တက္ကသိုလ်တည်ဆောက်မယ့်နေရာထိ အလံတွေဝှေ့ ရမ်းပြီးကြိုဆိုတယ်ဆိုတာက
တက္ကသိုလ်ဆောက်ခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ မှောင်ခိုယာဇာ (စစ်ခွေးတွေနဲ့ နီးစပ်သူ)က ခိုင်းစေ
ဒီတက္ကသိုလ်ဆောက်ခွင့်ပြုတဲ့ ကိစ္စအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမှနားမလည်နိုင်အောင်ပါဘဲ။တောင်ကုတ်မြို့ ဟာ
မူးယစ်ဆေးဝါးပေါင်းစုံရတဲ့မြို့ ၊မှောင်ခိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာမြို့ ဖြစ်လေတော့ ဘယ်လိုမှ တက္ကသိုလ်
နဲ့ မတန်တဲ့မြို့ ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံသွားပါတယ်။
ရေးသားတဲ့ ရည်ရွယ် ချက် ကောင်းတယ်။ တင်ပြပုံ ကတော့ နဲနဲ လေး မာန်ပါနေတယ်။
ဂရုဏာ ဒေါသော ရေးဟန်လို့ တင်စားရမလား။
ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်နေ တဲ့ ပုံစံ နဲ့ ဖြစ်ချင်တာလေး ကို ပြောသွားတာ ကောင်းပါတယ်။
သဘောကျတယ်ကိုကို MyanmarCitizen ရေ………….။
တက္ကသိုလ်တွေကို မြို့ပြင်ထုတ်ထားတာ ဘာလို့လဲ?
ဘူဒွေက ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်ထားတာလဲ ???
ကိုတိုက်တန် ရေ ဘယ်ကောင်တွေကရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်သလဲဆိုတော့
စစ်ခွေးတွေဘဲပေါ့ဗျာ။သူတို့ ကိုဆူဆူပူပူလုပ်မယ့်ကျောင်းသားတွေကို. နယ်ဝေး
ကျောင်းတွေပို့ ၊မြို့ ပြင်ထုတ်ထားတော့ လူစုခွဲပြီးသားပေါ့ဗျာ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်
Yes, Correct, I totally agreed with you, Brother.
By Military point of view, as like that-
( 1 ) Easy to control–They can control any students movement by cutting communication ( Information ) and transportation routes.
(2) Make the enemy to be busy– By very long transportation, the students are tired, so could not interested in others ( especially on Politics ).
Therefore the military govt moved most of the University and colleges far from towns.
Another opportunities for them are – to construct new buildings by government’s money ( I believed that you already known who took most of that money.)
” Medical University ကိုတော့ သီးခြားရပ်တည်ခိုင်းထားရမယ် – – – –
အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့အတွက် သေချာစိစစ်ပြီးမှလက်ခံမယ် ”
ကို myanmarcitizen ရေ
တခြား ကိစ္စတွေတော့ အဘ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး
Medical University ကို အရေးအကြီးဆုံးလို့ ယူဆတဲ့ Idea ကတော့
ပက်ပက်စက်စက်ကို လွဲပြီး ၊ နိုင်ငံတကာ အမြင် အားနည်းတာကိုပြနေတယ် ။
တိုင်းပြည်ကြီးကို ( ၁၉၆၂ – ၂၀၁၁ ) နှစ် ၅၀ လုံးလုံး
ပိတ်လှောင်ခံထားရခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက် ဖြစ်မယ် ။
ပညာရပ်တိုင်းဟာ သူ့နေရာနှင့်သူ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးပါကြပါတယ် ။
တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် အရေးပါဆုံးကိုပြောကြကြေး ဆိုရင်တော့
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်က
Singapore နိုင်ငံ မှာ High School အောင်ပြီး Top 10 ဝင်တဲ့ သူတွေကို
Singapore ဝန်ကြီးချုပ် လီကွမ်ယု နှင့် TV မှာ တွေ့ဆုံပွဲလုပ်တယ် ။
အဲဒီထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်လဲပါတယ် ။
ဝန်ကြီးချုပ် လီကွမ်ယု က သူ့ကို သမီး ဘာဆက်လုပ်မလဲ မေးတော့
သမီး ဆရာဝန်လုပ်မယ် လို့ဖြေတယ် ။
ဝန်ကြီးချုပ် လီကွမ်ယု က စိတ်မကောင်းတဲ့လေသံနှင့်
တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင် အတော်ဆုံး သူတွေဟာ
Physics ၊ Chemistry ၊ စသဖြင့် ယူပြီး Research တွေလုပ် တီထွင် သင့်တယ် ။
ဆရာဝန် ၊ အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်ဆိုတာ
သူများတွေ တီထွင်ပြီးသား ရှာဖွေသိရှိပြီးသား ဖေါ်ထုတ်ပြီးသား
Theory တွေ Practice တွေ ကို
Follow လေးလုပ်ပြီး ၊ လိုက်နာရုံလေးသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၊
တိုင်းပြည်ရဲ့ အတော်ဆုံးဆိုတဲ့သူတွေ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်ကွယ့် ။
နောက်ပြီး ၊ သိပ်မကြာခင်က MG ရဲ့ ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ ဆရာဂီ ပြောခဲ့တဲ့ ။
ဆရာဝန် ၊ အင်ဂျင်နီယာ ၊ even စစ်သား ကအစ ၊ နိုင်ငံခြားက တင်သွင်းလို့ရပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် မြန်မာ အနုပညာရှင် ကိုတော့ နိုင်ငံခြားက တင်သွင်းလို့ မရပါဘူး ။
ဆိုတဲ့ စကားလေးကလည်း စဉ်းစားစရာပါ ။
လိုရင်းပြောရရင်တော့ ဆိုက်ကားနင်းတာက အစ ပညာရပ်တိုင်းဟာ
သူ့နေရာနှင့်သူ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးပါကြပါတယ် ။
အဲဒါကိုမှ ထပ်ပြီး အရေးအပါဆုံးကိုရွေးရမယ် ဆိုရင်တော့ ၊
Medical ( ဆရာဝန် ) မဟုတ်တာကတော့ သေချာပါတယ်ကွယ် ။
ဥခွံထဲက ဖေါက်ထွက်လာခဲ့ပါတော့ ၊ နိုင်ငံသားတို့ရေ ။
Bravo, ( Uncle ) Foreign Resident,
Thanks you for sharing of Singapore ဝန်ကြီးချုပ် လီကွမ်ယု ‘s Idea and guide line.
Our universities are far away BEHIND them ( Singapore Universities ).
Now most of Myanmar Top 10 are there. ( May be Top 1000 )
So.. Singapore got Top / Talented Myanmar.
So.. Singapore is No3richest country on the world.
အခုလိုထောက်ပြပေးတဲ့ အတွက် အဘရေ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရေးနေတဲ့ အချိန်တုန်းက လူတစ်ယောက်မှာ ကျမ်းမာရေးက အရေးအကြီးဆုံး လို့ခံစားမိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေလို့။ အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ ကျမ်းမာရေးကို ကုသရာမှာ တက်ယောင်ကား အလောင်းစီသူ လိုဆရာ ၀န်မျိုးတွေ ပေါ်လာမှာကို တွေးကြောက်မိလို့ အရေးကြီးဆုံးလို့ ပြောမိတာပါ ခင်ဗျာ။ (ကျွန်တော့အရေးအသားအရ အဘ ပြောသလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာကို လဲဝန်ခံပါတယ်ခင်ဗျား)။ အဘ ပြောတဲ့ “တိုင်းပြည်အတွက် အားလုံး (ဆိုက်ကားဆရာကအစ) အရေးပါကြပါတယ်” အဆိုကိုလဲလေးလေးနက်နက်ထောက်ခံပါတယ်။
အဘရေ….. စွန့် ဦးတီထွင်သူတွေကိုထည့်တွက်စေချင်ပါတယ်။ဆရာဝန်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊
အင်ဂျင်နီယာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ရှေးနည်းစနစ်တွေအပြင် မပြတ်မလပ်သောနည်းအသစ်
အသစ်တွေ၊ကုထုံးတွေရှာဖွေနေကြရစမြဲပါဘဲနော်။သူ့ နေရာနဲ့ သူအရေးကြီးအသုံး